10 akanakisa mafoto vanoona kutsiva Windows application, Emulator.online ▷ 🥇
Windows 10's native photo muoni haanyanyo kufarirwa nevashandisi veesisitimu. Kunyanya, nekuda kwekunonoka kuvhura mifananidzo uye kuenderana nemafomati mashoma. Zvakare, iwo aripo ekugadzirisa mabasa akarambidzwa.
Kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira dzechirongwa ichi, isu takanyora gumi dzakanakisa dzemahara vataridzi vemifananidzo kuti vatore paWindows PC yako. Buda!
Yakareruka uye iri nyore kushandisa, FastStone Image Viewer inokutendera kuti utarise mifananidzo mune yakazara skrini, zoom, uye utarise data reEXIF. Folda yekufambisa inogona kuitwa kuburikidza neyemusoro menyu. Zvishandiso zvinowanikwa mubhawa pazasi kwechiso.
Inoenderana nezvakawanda zvekuwedzera, iyo zvakare inopa ekugadzirisa mabasa. Izvi zvinosanganisira kucheka, kushandura saizi, kubviswa kweziso dzvuku, uye kugadzirisa mwenje. Izvo zvinoita zvakare kuita masiraidhi ekuratidzira, kuisa zvinyorwa uye zvidhori pamifananidzo, pakati pezvimwe sarudzo.
FastStone Mufananidzo Wekutarisa (mahara): Windows 10, 8, 7, Vista uye XP.
Winaero ane chaiwo mashandiro emabasa ekugadzirisa windows marongero uye maficha. Pakati pavo, pane sarudzo yekuunza iyo yakasarudzika system foto muoni ku Windows 10.
Kuti uite izvi, vhura chirongwa uye tsvaga Foto mubhokisi rekutsvaga. tinya pa Tora chaiwo maapplication / Activate Windows Photo Verr. Wobva waenda ku Shandisa Windows Photo Verr.
Uchaendeswa kunzvimbo dzese dzekushandisa. Dzvanya iyo application inotsanangurwa muPhoto Viewer, uye mune iyo runyorwa inoonekwa, enda ku Windows Photo Viewer. Ehe, ichave iripo mune sarudzo, semazuva ekare.
Winaero Tweaker (mahara): Windows 10, 8 uye 7
Imwe yeakanakisa interface mapurogiramu pane edu runyorwa. ImageGlass inopa zviwanikwa kune avo vari kutsvaga akanaka mufananidzo muoni, pasina zvekuwedzera. Iyo application inokutendera iwe kutenderedza iyo mufananidzo yakatwasuka uye yakatwasuka, pamwe nekugadzirisa iyo upamhi, kukwirira kana kutora iro rese skrini.
Iwe unogona zvakare kubatanidza kuwedzeredza kune chaiwo emifananidzo edhita, semuenzaniso, ingovhura PNG mu Photoshop. Iwe unogona zvakare kusarudza kuti uratidze bharaki, thumburu pani, uye rakasviba kana cheki kumashure.
Iyi purogiramu inotsigira mafaera mune anopfuura makumi manomwe mafomati, akadai seJPG, GIF, SVG, HEIC, uye RAW.
ImageGlass (mahara): Windows 10, 8.1, 8, SP1, 7
Chiedza, chinokurumidza uye chinoshanda ndiwo mazwi anogona kutsanangura JPEGView. Iyo application inosimbisa iyo chifananidzo, ine barbar rekushandisa ine minimalist uye yakajeka mifananidzo. Iyo inongoratidzwa chete apo mbeva iri kutenderera pamusoro pasi pechidzitiro. Dhata nezve iyo pikicha, kusanganisira histogram, inogona kutariswa nekudzvanya tsamba i.
Kana iwe ukafambisa pointer pasi, dzimwe sarudzo dzinonakidza dzekugadzirisa dzinoratidzwa. Pakati pavo, chishandiso chekugadzirisa kusiyanisa, kupenya uye kuzadza, shading shanduko uye blur. Inotsigira JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF uye TIF mafomati.
JPEGVona (mahara): Windows 10, 8, 7, Vista uye XP
123 Photo Viewer inomiririra rutsigiro rwayo mafomati anonetsa kuwana mune vamwe vataridzi vemifananidzo yeWindows, seLIVP, BPG nePSD. Iko kunyorera kunokutendera kuti uswededze nekamwe chete uye ine mapfupi ekhibhodi kuti ushandise nyore.
Uye zvakare, ine akasiyana mabasa ekugadzirisa, senge mafirita, kubatanidza mifananidzo, uye kuiswa kwemavara. Chirongwa ichi zvakare chinotsigira ekuwedzeredza ekuwedzera, akadai seGIF, APNG, uye WebP. Iyo chete yekudzikira ndeyekutarisana neye yakabhadharwa vhezheni kushambadzira paimba screen.
123 Photo Viewer (mahara): Windows 10 uye 8.1
IrfanView isingaremi, nyore kushandisa muoni ane nyore-kuwana-mabhatani ekudhinda, kutsemura chikamu chemufananidzo, uye kutarisa ruzivo rweEXIF. Iyo purogiramu ine fomati kutendeuka basa, senge kubva PNG kuenda kuJPEG nyore
Iwe unogona zvakare kuisa watermark, wedzera miganhu, uye gadziridza mavara. Zvichiri maererano nekugadzirisa, mushandisi anogona kudzora uye kutenderedza iyo faira, kuisa mafirita uye mhedzisiro, uye kutochinja rimwe ruvara kune rimwe.
Iyo app inogona kunge isingaite seyakajeka kune avo vasina ruzivo rwekugadzirisa. Zvakare, kuti uishandise muchiPutukezi, unofanirwa kurodha pasi nekumisikidza rongedzo yemitauro inowanikwa kubva kune yewebhusaiti. Asi maitiro acho anokurumidza.
IrfanView (mahara): Windows 10, 8, 7, Vista uye XP
IrfanVona mutauro pack
XnView imwe yemufananidzo muoni sarudzo inouya nenhamba yekuwedzera maficha. Kunyangwe isiri imwe yesarudzo dzakanakisa maererano nekushandisa, inowirirana neanopfuura mazana mashanu mafomati uye inobvumidza zviito zvematch. Pakati pavo, rename uye chinja akawanda mafaera panguva imwe chete.
Iwe unogona zvakare kugadzirisa uye kurima mifananidzo, tora pavari, uye gadzirisa red-ziso. Iko kune zvakare mukana wekugadzirisa zvinhu senge kupenya, kusiyanisa, kuzadza, mimvuri, pakati pevamwe.
XnView (mahara): Windows 10 uye 7
Yakareruka uye iri nyore kushandisa, HoneyView inosimbisa izvo zvakakosha zvinhu zvinotarisirwa kune muoni wemufananidzo. Ndokunge, swededza mukati nekubuda, tenderera pikicha uye enda kune inotevera kana kuti dzokera kune yakapfuura.
Ruzivo rweExpIF runogona kukurumidza kuwanikwa kuburikidza nekabhatani riri kumusoro kuruboshwe kwechiratidziri. Kunze kwekunge uine batch mufananidzo fomati kutendeuka, chirongwa ichi chinokutendera iwe kuti uone compressed mafaera pasina ku decompress iwo.
HoneyView (mahara): Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista uye XP.
Nomacs ine chitarisiko chinoyeuchidza iyo yechinyakare Windows foto muoni. Naizvozvo, chero munhu anoda chirongwa cheMicrosoft haafanire kunetseka kushandisa chishandiso ichi. Kana iri yekuratidzira pachayo, iyo inokutendera iwe kushandura zviri nyore iyo modhi pakati pazere skrini, 100% kana kutanga.
Izvo zvakare zvinokwanisika kutenderera, kudzora uye kurima mufananidzo uchishandisa mabhatani akasimbiswa. Iyo software inopawo akasiyana ekugadzirisa maturusi akadai sekuzadza kugadzirisa, PC icon yekugadzira, uye nezvimwe.
mazita (mahara): Windows 10, 8, 7, Vista, XP uye 2000
10. Mifananidzo yeGoogle
Muoni wega wepamhepo pane yedu runyorwa, Google Mifananidzo inogona kunge iri sarudzo yeavo vanofarira kuchengeta mafaera ese pamwechete munzvimbo imwechete. Iyo mobile application inokubvumidza iwe otomatiki backup mapikicha uye uwane iwo kubva kubhurawuza.
Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kuisa iyo mifananidzo yakachengetwa paPC neGoogle Drive kune iyo webhu vhezheni yechirongwa. Iyo sevhisi ine yekutsvaga kwemisoro nenzvimbo uye zvakapusa ekugadzirisa maturusi. Iyo zvakare ine otomatiki magungano uye zviyeuchidzo kubva pazuva rimwe chetero mumakore apfuura.
Chingave chinokanganisa vamwe kudiwa kwekubatanidza internet kuti uishandise.
Mapikicha eGoogle (mahara): Webhu
Seta nyowani yekuona foto seyakasarudzika
Windows inotsanangura iyo yechinyakare chirongwa chirongwa seye default muoni. Ndokunge, ichashandiswa kuvhura mafoto ese otomatiki. Kuti uchinjire kuchirongwa chakadzorwa, ingo tevera matanho ari pazasi:
1. Dzvanya-kurudyi mufananidzo, uye mumenyu inovhura, tinya Vhura ne;
2. Zvakawanda sezvauri kutarisa iyo show mune yakaratidzwa runyorwa, sarudza Sarudza imwe application;
3. Usati wadzvanya icon yechirongwa, tarisa bhokisi riri padhuze ne Gara uchishandisa izvi application yekuvhura mafaera .jpg (kana chero chiwedzerwa chemufananidzo);
4. Zvino, tinya pachirongwa uye simbisa pa Zvakanaka.
Kana iwe usingakwanise kuwana iro zita rechirongwa, peta pasi runyorwa uye enda ku Zvimwe zvinoshandiswa. Kana iwe uchiri kusakwanisa kuiwana, tinya Tsvaga imwe application paPC iyi. Mubhokisi rinovhura, nyora zita rechirongwa mubhawa rekutsvaga.
Paunowana, tinya pairi uyezve bhatani Vhura. Wobva wadzokorora matanho ari pamusoro, iko kunyorera kuchasanganisirwa pakati pesarudzo dzekushandisa.
Yakanaka vhidhiyo vatambi vePC neMac
Iwo akanakisa emahara uye epamhepo mameseji edhita